Maitiro Ekugadzira Zvirinani Email Kushambadzira Lists Uchishandisa Yemagariro Midhiya Martech Zone
Email kushambadzira yave iri nzira inozivikanwa kune vashambadziri kuti vasvike vangangoita vatengi kubva pakagamuchirwa kwakapararira kuma1990. Kunyangwe pakagadzirwa matekinoroji matsva senge vezvenhau, kukurudzira, uye kushambadzira zvemukati, email ichiri kutarisirwa senge inoshanda zvakanyanya maererano tsvakurudzo ye 1,800 vatengesi inoitiswa naSmart Insights uye GetResponse.
Nekudaro, izvo hazvireve kuti email kushambadzira yakanakisa maitiro haina kushanduka nehunyanzvi hutsva. Kutenda kune vezvenhau pane izvozvi nzira dzaunganyatso kuvandudza mhando yeemail yako yekushambadzira runyorwa kupfuura kungoita webhusaiti yekupinda-fomu uye kutenga rechitatu-bato zvinyorwa.
Pazasi penzira shanu dzaungashandise pasocial media kuvandudza mhando yeemail yako inotungamira runyorwa kubva pane zvekutanga kusvika kumatekinoroji epamberi.
Tora Yako Yemagariro Media Vateveri kuti Vayambuke Channel
Nzira iri nyore yekumisikidza yako email runyorwa nevezvenhau vezvenhau ndeyokukurudzira ako ezveshamwari enhau shamwari, vateveri nekubatana kusaina kune yako email runyorwa. Iyi ingaite senge iri pachena, asi makambani mazhinji haazvinetse nekutevera uye nekubata kwavo kunongedzera munzira dzakasiyana.
Usafunge vateveri vako vezvenhau zvakanyanya vanhu vakafanana nevaya vari pane yako email rondedzero. Zvakare, usanyora kure kukosha kweshamwari dzako midhiya sekushomeka simba rekuita kana kukanganisa sarudzo yekutengesa. Mune ruzivo rwangu, kana ichokwadi.
Gadzira yemagariro enhau mushandirapamwe unotungamira kune yekusaina-peji peji pawebhusaiti yako. Iwe unogona kushamisika kuti mangani emhando anotungamira iwe aunogona kusaina kuburikidza nemasaiti senge Twitter, Facebook uye LinkedIn kana iwe uchigara uchipinda vashandisi vezvemagariro munhaurirano dzemusoro wenyaya uye nezvakakosha-zvakawedzerwa zvemukati Zvakakoshawo, kana vanhu ava vachigara vachikurukura newe pasocial media vanonyanya kuvhura nekuverenga maemail ako.
Zivhura Yakavanzika Kutaridzika Kunotungamira Neve Facebook Vateereri
Nemagariro enhau, yako yazvino email runyorwa haibatanidze iwe chete kune avo chaivo vanhu. Iyo zvakare inovhura dziva rakakura kwazvo revanogona vatungamiriri vevanhu vakafanana vachishandisa maFacebook Tsika yeVateereri ficha.
Kushandisa chimiro chiri nyore. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kurodha pasi kana kuteedzera uye unamate yako email zvinyorwa zvinotungamira kubva paspredishiti. Wobva wadimbudzira vateereri vako netsika dzakakodzera, senge zera uye zvido, uye udza Facebook kuti iwane kutarisa vateereri.
Facebook inozo trawl dhatabhesi yayo kuti iwane vanhu vane hunhu hwakafanana kune yako yazvino email rondedzero vanyori. Gadzira shambadziro yakanangwa iyo inogonesa nhengo dzevateereri vako vakataridzika kuti vadzike uye vanange kune peji rekumhara pane yako saiti senge mune yapfuura tip.
Shandisa Social Media Kuti Uwane Email Kero
Iwe unogona zvakare kushandisa zvemagariro midhiya anobata kuti uwane iro basa maemail kero emitungamiriri uchishandisa iri nyore, asi zvishoma yepamusoro nzira, inonzi data kuwedzera.
Dhata inotsvaga kushambadzira iri kushandisa rechitatu bato sevhisi kuzadza zvisipo (sezita rebasa kana kero yeemail yebasa) kune yako inotungamira 'info yekubata. Mamwe makambani ane hunyanzvi munzvimbo ino, anosanganisira Sellhack, Clearbit uye Pipl (kwandinoshanda).
Semuenzaniso, muKutsvaga kwaPipl, vashandisi vanogona kurodha runyorwa rwune mazita ekutungamira 'uye masocial media anobata uye kurodha pasi runyorwa nemakero eemail asipo akawedzerwa pairi.
Aya maappend ekushandisa masevhisi anogona kushandiswa tsvaga email kero yeinogona kutungamira inowanikwa kuburikidza nekuteerera kwenzanga. Kuti udzivise kuve spammer ita shuwa kuti iwe unopa yakajeka sarudzo yekubuda kana uchisvika kune vanhu ava.
Simbisa Yako Email Rondedzero Ne Kana Pasina Yemagariro Media
Icho chinhu chinosuruvarisa chekushambadzira kweemail kuti imwe muzana yevanhu vanozosaina-tsvaga yako email runyorwa vachishandisa nyepera email kero. Kutumira tsamba maateri aya hakungoparadze nguva yako chete, asi maemail akawandisa anozopedzisira achitungamira wako webasa reemail kuti akupe zita rekuti spambot uye bvisa account yako.
Unogona kushandisa akati wandei wemakwikwi mutengo email sosi yekuongorora kubvisa maemail enhema, kusanganisira Usamborega, BriteVandudza, Yakawanda Bulk Email Validator, Email Validator uye Experian Dhata Yemhando.
Kazhinji kazhinji, vanhu vanoshandisa maakaundi emaimeri kana kero yavanotarisa zvishoma kubva kune vanopa seGmail neYahoo vachizadza fomu rekutaurirana. Izvi zvinoita kuti kunyatso kutaurirana nevanhu ava uye kukodzera zvinotungamira zvakanyanya kuoma.
Neraki, masevhisi senge Nyowani Kero uye Dhata Dhata ichakubatsira iwe kuwana vatengi 'vakasarudzika email kero uye maemail angangopindura kupiwa zvichienderana nebasa chiitiko.
Neimwe nzira, iwe unogona kushandisa yemagariro midhiya inobata uye apfuura email kero ne Pipl's Vanhu Dhata API kuti uwane dzimwe nzira uye shanda email kero. Iyo-yakatemwa nhoroondo dhata pane zvinyorwa zveemail zvinofanirwa kukupa iwe zano rekuti email iri kushandiswa uye ingangoita zita rebasa uye nerumwe ruzivo rwehunyanzvi kukwidziridza iyo inotungamira.
Iyo kiyi yekuona kuti ndedzipi ndedzipi nhatu idzi mhando dzemasevhisi ari kuenzanisa mitengo yavo, mareti ematanho uye kuti tekinoroji yavo inokwana sei mune yako yekutungamira runyorwa dhizaini dhizaini uye chinangwa.
Nyore Kukwikwidzana Kubatsira
Chinhu chikuru chinotora ndechekuti zvakakosha kuti ugadzire pakushandisa matekinoroji nyowani kuti uvandudze mhando yemameseji ekushambadzira emaimeri uye nemitero yavo yekukurukura. Kumwe kuwanikwa mune iyo 2015 Smart Insights ongororo yaive yekuti vashoma chete (53%) yevatengesi vaishandisa lead-gen uye kunyora maturusi ekuvaka kunatsiridza kukura uye kugona kwavo kwekutungamira kusvika. Vashoma vashambadzi (vashoma pane makumi maviri neshanu muzana) vanoshandisa zvemagariro kana zvemukati marongero ekuvaka mhando dzemhando. Zvipe iwe mukana wemakwikwi. Kutora iro danho rekuwedzera kunogona kuve nyore.
Tags: BriteVandudzaemail yakawanda inogonesaemail maakaundiemail inoshandaongororo yeemailruzivo rwe datanyowani keropombipipl dhata apievanhu vezvenhaudhata data
Ronen muvhangeri wechigadzirwa pa Pipl, kambani yakazvipira kuita kuti zvive nyore kushandisa zvemagariro uye zvehunyanzvi ruzivo nezve vanhu. Unogona kumutevera uye nhau dzichangoburwa uye maapuro kubva Pipl pane Twitter.
Hei, ndatenda nekugovana ruzivo rwakakosha nezve Email Kushambadzira. Ndinofara kuona mamwe mablog ako nezve email append sevhisi.